China Barbed Wire Kugadzira Machine Kugadzira uye Fekitori | Jiake
Muenzaniso Nha .: CS-A, CS-B, CS-C
Jiake Machinery's yakakwira-inomhanya mhinzwa waya muchina inopa yakanakisa mhinduro yekugadzira Barbed waya.
Yedu mhangura waya uye reza michina yematare waya zviri nyore kushanda, inogona kuwedzera zvakanyanya kugadzirwa kwekugadzira, uye inokodzera kugadzirwa kwemhando dzakasiyana dzekuchengetedza waya mesh masita.
Mhando nhatu: zvakajairika zvakamonyoroka, imwechete tambo, yakapetwa kaviri kutenderera
Raw zvinhu: kwakakurudzira waya, PVC zvemapuranga waya, etc.
Mumwe mushandi anogona kushandisa michina yakawanda:
Awa imwe inogona kuburitsa ingangoita 70KG / 40KG / 50KG:
Rakarukwa Wire Kuita Machine unobereka minzwa waya. Tambo dzakakodzwa dzinoshandiswa mukuchengetedza, munzvimbo yekutamba nharaunda, kudyisa zvipfuyo kana muganho wenyika, mune dziviriro yenyika, kurima, kuchengetedza zvipfuyo, Expressway, nezvimwe. Isu tinogara tichichengeta yakanakisa dhizaini dhizaini uye yekugadzira tekinoroji mune ino mhangura waya muchina kwemakore mazhinji.
Isu tinogadzira matatu mamodheru emuchina wewaya waya waya muchina: CS-A ndeyeyakajairika yakamonyororwa barbed waya muchina; CS-C inowirirana nekaviri twist mhangura waya muchina; CS-B ndeye imwechete yakarukwa waya yekugadzira muchina.
Muenzaniso CS-A CS-B CS-C
Main waya dhayamita 1.5-3.0mm 2.0-3.0mm 1.6-2.8mm
Barbed waya dhayamita 1.6-2.8mm 1.6-2.8mm 1.6-2.2mm
Nhamba yakamonyoroka 3-5 7
Motokari 2.2kw 2.2kw 2.2kw
Raw zvinhu Kwakakurudzira waya kana PVC zvemapuranga waya. Kwakakurudzira waya Kwakakurudzira waya
Kugadzira 70kg / h, 25m / min 40kg / h, 18m / min 50kg / h, 18m / min
Huremu hwese 1050KG 1000KG 1050KG
Kukura kwepacking 5.9CBM 5.8CBM 5.9CBM
Nemaoko kumisikidza, Nyore kumisikidza;
Simbi yekuvhara pane yekutyaira shaft yekuchengetedza mashandiro;
Kuchengetedza zvinhu uye zvakakwirira kugona;
Counter kuverenga huwandu hwemabhawa uye kuverenga urefu hwesimbi yakakoswa.
Bhatani switch uye leveler kutanga uye kumisa muchina nyore.
Inokurumidza uye yakapusa roll roll kubva kumuchina.
Inotungamira sisitimu yekudzivirira waya waya.
Tambo dzakakodzwa dzinoshandiswa mukuchengetedza, munzvimbo yekutamba, kufudza zvipfuyo kana boarder yenyika, mune dziviriro yenyika, kurima, kuchengetedza zvipfuyo, Expressway, nezvimwe.
Otomatiki Barbed Wire Kugadzira Machine
Yakavezwa Wire Machine
Barbed Wire Razor Muchina
Barbed Waya Razor Wire Machine
Yakazara otomatiki Yakakomberedzwa Wire Machine